Wasirka gaasaandhiga oo Maantay marki ugu horaysay Tagay Xafiiskiisa - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Wasirka gaasaandhiga oo Maantay marki ugu horaysay Tagay Xafiiskiisa
Wasirka gaasaandhiga oo Maantay marki ugu horaysay Tagay Xafiiskiisa
Wasaaradda Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa maalmo kadib si rasmi ah ugu shaqo bilaabay xafiiskiisa oo ku dhax yaala wasaaradda gaashaandhiga.
Wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaana xafiiskiisa kulan gaar ah kula yeeshay saraakiil katirsan ciidanka xoogga dalka uu hogaaminayay taliye ku xigeenka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Cabaas Aamiin Cali.
Kulanka ayaa wasiir Jaamac kaga dhageestay taliye kuxigeenka ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha kale warbixin la xariirta ciidamada iyo sida ay u socdaan howlgalada ciidamada ka wadaan qaar kamid ah gobolada dalka.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa kula dar daarmay saraakiisha ciidanka dardar-galinta howlgaladda ka dhanka Al Shabaab iyo ka shaqeynta Horumarinta ciidanka xoogga Soomaliyeed.
Previous articleLayaab: Gabar 11 Sana jirta oo loo Magacaabay Danjire
Next articleGudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Galmudug oo Wacad Ku maray in la Ciqaabi doono Cidamadii ku Lugta lahaa dagaalkii Guriceel